*အမြင်* | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » *အမြင်*
Posted by toyo on Sep 2, 2010 in News |0comments
ဆရာက ကျောင်းသား နှစ်ယောက်ကို မေးခွန်းမေးပါတယ်။ အင်မတန် အဆင့်မြင့်ပြီး အတော် စဉ်းစားယူရတဲ့ သင်္ချာ ဥာဏ်စမ်းတွေပါ။
ပထမကျောင်းသားက မေးခွန်းခက်တာကို မြင်ပြီး ဒီလိုစဉ်းစားပါတယ်၊
“ဆရာက ငါမဖြေနိူင်မယ့် မေးခွန်းတွေကို တမင်သက်သက် မေးတာပဲ၊ ဟိုတစ်ခါတုန်းက သူလာတာကို ထနှုတ်မဆက်ပဲ နေမိတာကို မကျေနပ်လို.ဖြစ်မယ်” …. သူဒီလို စတွေးတာနဲ.တင် မေးခွန်းတွေကို ကောင်းကောင်း မဖြေနိူင် တော့ပါဘူး…
နောက်တစ်ယောက် ကတော့ ဒီလိုမြင်ပါတယ်
“ဆရာ့ မေးခွန်းတွေက အတော် အဆင့်မြင့်တယ်၊ ငါတို.အဆင့်နဲ. ဖြေလို.ရတဲ့ မေးခွန်းတွေ ဖြစ်လောက်ပါတယ်၊ ကြိုးစား ဖြေကြည်.ဦးမှပဲ” … သူကတော့ မေးခွန်း အတော် များများကို ဆရာ ကျေနပ်လောက်တဲ့ အထိ ဖြေဆိုနိူင်ခဲ့ပါတယ်….
ဒီအဖြစ် အပျက်လေးကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် Perception လို.ခေါ်တဲ့ အထင်အမြင် ယူဆချက် တစ်ခုဟာ အစစအရာရာ အဆင်ပြေ ချောမွေ.စေဖို.အတွက် ဘယ်အတိုင်း အတာထိ အရေးပါ အရာရောက်တယ် ဆိုတာ တွေ.မြင်နိူင်ပါတယ်၊ အခြားသူ တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုပဲ ရှိရှိ၊ ဘာ ရည်ရွယ်ချက်နဲ.ပဲ မေးမေး “ဒုတိယ ကျောင်းသား” လိုပဲ ရိုးရိုးတွေးပြီး အကောင်းဆုံး အဖြေပေးသင့်ပါတယ်…။
ဆရာက ကျောင်းသား တစ်ယောက်ကို စားပွဲရှေ.မှာ ထိုင်ခိုင်းပြီး “က” တစ်လုံးရေးပြပါလို. ခိုင်းပါတယ်။ ကျောင်းသားက ရေးပြီး ဆရာ့ရှေ.ကို ထိုးပေးလိုက်ပါတယ်…. ဆရာက သူ.အဖြေကို လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ ဆရာ့ဘက်က ကြည့်တော့ အဖြေက “ယ” ဖြစ်နေတာကိုး…
နောက်ကျောင်းသား တစ်ယောက်ကို ဆရာက ခေါ်ခိုင်းပါတယ်…ကျောင်းသားက ရေးပြီး” စာရွက်ကို ဆရာ့ဘက် တစ်ပတ်လှည့်ပြီး ပြလိုက်ပါတယ်… ဆရာက သူ.အဖြေကို သဘောကျ လက်ခံခဲ့ပါတယ်….
ဒီအဖြစ်ပျက်လေးမှာ “ကိစ္စရပ်တိုင်းမှာ Angle Of Vision လို.ခေါ်တဲ့ ရှုထောင့် အမျိုးမျိုး ရှိနိူင်တယ် ဆိုတာပါပဲ”… ကျောင်းသား နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ အဖြေဟာ အမှန်တွေချည်းပါပဲ… ဒါပေမဲ့ ပထမ ကျောင်းသားဟာ သူ.ဘက် အမြင်အတိုင်း ဆရာ့ကို ပြတာကိုး… ဒီနေရာမှာ သတိထားရမှာက ဒုတိယ ကျောင်းသားဟာ ဆရာ့ဘက်က “က” လို. မြင်ရအောင် သူက “ယ”လို. အမှားကြီးေ ရးလိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး… သူလည်း အမှန်ပဲ ရေးလိုက်ပြီး ဆရာ့ဘက်ကလည်း အမှန်ပဲ မြင်နိူင်အောင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေမယ့် အခြေအနေ တစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်တာပါ…
အချို.သော ကိစ္စရပ်တွေမှာ သူ.ဘက်ကလည်း ဘယ်လိုများ မြင်နိူင်မလည်းလို. စဉ်းစားတွေးခေါ် ချင့်ချိန်ပြီး သူ.ရဲ့ ရှုထောင့်ကနေ မြင်ပြ၊ တွေးပြ၊ ဆွေးနွေးပြဖို. လိုပါလိမ့်မယ်…. အဲဒါမှလည်း ကိုယ်မှန်တယ် ဆိုတာကို သူနားလည် လက်ခံနိူင် လာမှာပါ… အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲ ကိုယ်မှန်တယ် ဆိုတာကို ကိုယ့်ဘက်က အမြင် တစ်ခုတည်းနဲ. ကြည့်ပြီး ဇွတ်အတင်း ငြင်းခုံနေမယ် ဆိုရင်တော့ လိုလားအပ်တဲ့ အခြေအနေ တစ်ခုကို ဘယ်တော့မှ ရောက်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး…
ဆရာက ကျောင်းသားကို ခုံပေါ်မှာ မတ်တပ် ရပ်ခိုင်းထားပြီး အပြစ်ပေး ထားပါတယ်… အချိန် အတော်ကြာတော့ ဆရာက ကျောင်းသားကို ဆုံးမဖို.လက်ယပ် ခေါ်လိုက်တယ်… ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ ကျောင်းသားက ရပ်နေတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် ဆရာက ပြန်ထိုင်ခိုင်းရင် ကောင်းမှာပဲလို. တွေးနေချိန်ပါ… ကျောင်းသားက လိုရာတွေးပြီး ထိုင်ချလိုက် ပါတယ်… အဲ့မှာတင် ပြဿနာက စတက်ပါတော့တယ်…
ဒါဟာ misunderstanding (နားလည်မှု လွဲချော်ခြင်း) ပါ၊ များသောအားဖြင့် Body Language လို.ခေါ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းကို အသုံးပြုပြီး အသံတိတ် စကားပြော ဆက်သွယ်တဲ့ အခါမျိုးမှာ နားလည်မှု လွဲချော်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်… အဆိုးဝါးဆုံး ကတော့ အထက်က ဖြစ်ရပ်ကလေးလို ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်အာရုံ (Emotion)ရဲ့ လွှမ်းမိုး ခြယ်လှယ်မှုကြောင့် သူတစ်ပါးရဲ့ စကားကို တလွဲ အဓိပ္ပာယ် ကောက်မိတာတွေ၊ အခြေအနေတွေကို အလွဲလွဲ အမှားမှား နားလည် သုံးသပ်မိတာ တွေပါပဲ၊ ဘယ်ဘာသာစကားနဲ.ပဲ ပြောပြော ဘယ်လိုကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ သူတစ်ပါး ကိုယ့်ကို ဘာပြောတယ်၊ ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်နဲ. ပြောတယ် ဆိုတာကို အမှန်အတိုင်း အရှိအတိုင်း နားလည်နိူင်အောင် ကြိုးစားခြင်းဟာ အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်…
ဆရာက ကျောင်းသားအားလုံး ရှေ.မှာ ရပ်ပြီး လက်ညှိုး တစ်ချောင်း ထောင်ပြီး ဒီလိုပြောပါတယ်…”မင်းတို. အားလုံး လက်ညှိုး ထောင်လိုက်ပါ” ကျောင်းသား အားလုံး ဆရာ့ကို စိတ်ဝင်တစား ကြည့်နေရာကနေ ဆရာ ခိုင်းတဲ့ အတိုင်းလိုက်လုပ် ကြပါတယ်… အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဆရာက သူ.ရဲ့နားထင်ကို လက်နဲ.ထောက်ပြီး… “အဲဒီလက်ညှိုးနဲ. ကိုယ့်နဖူးကို ထောက်လိုက်ကြပါ” လို. ထပ်ပြောပါတယ်… ကျောင်းသား အားလုံးဟာ ဆရာ လုပ်တဲ့အတိုင်း နားထင်ကို လိုက်ထောက် ကြပါတယ်…ခဏနေမှ သူတို.မှားသွားမှန်း အားလုံးက သဘောပေါက် လိုက်ကြပါတယ်… “ဆရာ ထောက်ခိုင်းတာက နဖူးကိုလေ”
ဒီအဖြစ် အပျက်လေးမှာ အကြားနဲ.အမြင် တစ်ထပ်တည်း မကျမှုကို တွေ.ရပါလိမ့်မယ်… တပြိုင်တည်းလို. ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းက အမြင်အာရုံက ဦးနှောက်ကိုအရင် ရောက်သွားတဲ့ သဘောပါ… အမြင်အာရုံဟာ အလင်းကို အခြေခံပြီးအကြား အာရုံကတော့ အသံမှာ အခြေခံပါတယ်… အလင်းရဲ့ အလျင်ဟာ အသံရဲ့ အလျင်ထက် ပိုမြန်တဲ့ အတွက် ဒီလိုဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်…
ဒီသဘော တရားလေးကို ကောင်းစွာ နားလည်မယ် ဆိုရင် ကိုယ်ပြောမယ့် စကားနဲ. သင့်တော်မယ့် လိုက်လျော ညီထွေ ဖြစ်မယ့် ဟန်ပန် အမူအရာ ထားမှသာလျှင် ကိုယ်ပြောမယ့် စကား အရာထင်မှာပါ… သိပ်ဆိုးတဲ့ ကလေး တစ်ယောက်ကို ငါရိုက်လိုက်ရ လို. မာန်ပြီး မျက်နှာက ပြုံးစိစိ လုပ်မယ်ဆိုရင် ကလေးက ကိုယ့်စကားကို အလေးမထားပဲ နေမှာပါ…
အဲဒီလိုပါပဲ ကိုယ့်လက်အောက် ငယ်သားတွေကို မင်းတို. ငါ့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်ကြပါ၊ မှားတာကို ထောက်ပြပါလို. ပြောနေပေမယ့် မျက်နှာက ငါ့ကို မကောင်းဘူးလို. ပြောလို.ကတော့ အလုပ် ထုတ်ပစ်မယ် ဆိုတဲ့ ရုပ်ပေါက်နေရင် ကိုယ်ပြောခဲ့တဲ့ စကားဟာ အလကား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်…
အရှင်းဆုံး ပြောရရင် ရိုးသားဖို.၊ ပြီးတော့ သတိထားဖို.ပါပဲ… လူတစ်ယောက်ဟာ ရိုးသားမယ်၊ စိတ်ထဲမှာ တကယ် ရှိတာကိုသာ ပြောမယ်ဆိုရင် သူ.ရဲ့ မျက်နှာကနေ သူ.ရဲ့ကောင်းတဲ့ စေတနာကို မြင်နိူင်ပါတယ်…
ဆရာက ကျောင်းသားတွေကို စာရွက် အဖြူရောင် ထောင်ပြပြီး ဒါ ဘာအရောင်လဲလို. မေးပါတယ်… ကျောင်းသား အားလုံးက တညီတညွတ်တည်း ဖြေကြပါတယ်… “အဖြူရောင်ပါ …”
ဆရာက White Borad ရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို ထောက်ပြီး ဒါကရော ဘာအရောင်လဲလို. မေးပြန်ပါတယ်… မဆိုင်းမတွပဲ အားလုံးက အဖြူရောင်ပါလို. ဖြေကြပါတယ်… အဲဒီနောက်မှာတော့ ဆရာက ခုနကစာရွက်ကို White Board မှာ ကပ်ပြီး “ဒီနှစ်ခုမှာ ဘယ်ဟာ အဖြူလဲ လို. မေးပြန်ပါတယ်”… ကျောင်းသား အားလုံး ဖြေရန် စွံ.အ သွားပါတော့တယ်…
ဒီအဖြစ် အပျက်လေးမှာ လူတွေ သတ်မှတ်တဲ့ စံနှုန်းတွေရဲ့ေ၀၀ါး ဆန်းပြားမှုကို တွေ.မြင်နိူင်ပါတယ်…. လူတစ်ယောက်က ချမ်းသာမယ်… နောက်တစ်ယောက်က ပိုချမ်းသာမယ်…နောက်တစ်ယောက်
ကပိုပြီး ချမ်းသာမယ် စသဖြင့်ပေါ့… သတ်မှတ်ချက် တွေမှာ အဆုံးသတ်မျဉ်း မရှိသလို အစစ်အမှန် ဆိုတာလည်း မရှိနိူင်ပါဘူး… ဒါကြောင့် ပြဿနာ တစ်ခုကို ဖြေရှင်းတဲ့ အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်အခြေအနေေ တွကို သေချာမှုမရှိတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ လာရောက် လွှမ်းမိုးတာ မခံစေဘဲ တကယ့် အရှိတရား (Being) မှာပဲ စူးစိုက် နှစ်မြှုပ် ထားနိူင်ဖို. လိုပါတယ်….ဒီလိုမှလည်း နည်းလမ်းကျပြီး မျှတတဲ့ အဖြေတစ်ခုကို ထုတ်နိူင်မှာပါ…
ဆရာက မေးပါတယ်… “အဖြူမဟုတ်ရင် ဘာလည်းကွ”…။ အဖြူမဟုတ်ရင် အမည်းပေါ့ ဟု ကျောင်းသားက ပြန်ဖြေပါတယ်…
တစ်ကယ်က “အဖြူမဟုတ်ရင် မဖြူတာတာတွေ အားလုံး ဖြစ်နိူင်တာလေ” ကျနော်တို.လည်း လူ.လောကထဲက ပြဿနာရပ် တော်တော် များများမှာ အဲဒီ ကျောင်းသားလေး လိုမျိုး ဖြစ်နိူင်ချေ (Propability) များစွာကို မစဉ်းစားပဲ၊ ဆန်.ကျင်ဘက် အမြင် (Opposite View) တွေကိုသာ ရုတ်တရက် စဉ်းစားမိတတ် ကြပါတယ်… ဥပမာ ကိုယ်သိထားတဲ့ အမှန်တရား တစ်ခုနဲ. အခြားလူ ပေးလာတဲ့ အဖြေတစ်ခုနဲ. ကိုက်ညီမှု မရှိတဲ့ အခါမျိုးမှာ တစ်ဘက်သူ မှားနေတယ် ဆိုပြီး ရုတ်တရက် ကောက်ချက် ချမိတတ်ပါတယ်… ကိစ္စရပ်တိုင်းမှာ ဖြစ်နိူင်ခြေတွေ တစ်ခုထက် ပိုပြီး ရှိနိူင်တယ် ဆိုတာ၊ စဉ်းစားပုံ စဉ်းစားနည်း (The Way Of Thinking) အပေါ် မူတည်ပြီး အဖြေ ဒါမှမဟုတ် ရလဒ်တွေဟာ တစ်နည်းတစ်ဖုံ ပြောင်းလဲ သွားနိူင်တယ် ဆိုတာတွေကို နားလည် ထားရပါမယ်… “ဒါမှ ငါမှန်တယ်၊ မင်းမှားတယ် ဆိုတဲ့ အမြင်တွေက လွတ်မြောက်ပြီး ငါလည်းမှန်တယ်၊ မင်းလည်း မှန်တယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်သူ.ရဲ့ လမ်းကြောင်းက ပိုပြီး အားကောင်းတယ် ဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးကို မြင်နိူင်စွမ်းရှိမှာပါ…
ပြဿနာဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ.တတ်နိူင်သမျှ ကင်းဝေးနိူင်ဖို.၊ နောင်တတွေ ခဏခဏ မရဖို.၊ အနည်းဆုံး လောကထဲမှာ ပြုံးပြုံးကလေး နေနိူင်ဖို. သိမိသမျှ၊ ဖတ်မိသမျှ၊ ကျင့်ကြံ အားထုတ်မိသမျှ ပေးဝေ လိုက်ရပါသည်…